တိုယိုတာကုမ္ပဏီမှ ကား ၇.၄သန်းပြန်လည်အပ်နှံပြုပြင်ရန်ကြေငြာ... | CarsDB
တိုယိုတာကုမ္ပဏီမှ ကား ၇.၄သန်းပြန်လည်အပ်နှံပြုပြင်ရန်ကြေငြာ - Vitz, Camry, Corolla, RAV4, Vios တို့ပါဝင်
MyanmarCarsDB - Yangon - 10 October 2012
အာရှအကြီးဆုံး ကားကုမ္ပဏီ Toyota သည် စက်ချို့ယွင်းမှုတစ်ချက်ဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် မေ ၂၀၀၅ နောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော ၎င်း၏ ကားအရေအတွက် စုစုပေါင်း ၇.၄၃ သန်းခန့်ကို နီးစပ်ရာ Authorized Dealer တွင်သွားရောက်အပ်နှံကာပြုပြင်မှုခံယူရန်ကြေငြာလိုက်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လုပ်ထားသော မော်ဒယ်ပေါင်း ၁၄မျိုးခန့် လက်ရှိပြဿနာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုကြားသိရပါသည်။
ပြဿနာအသေးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာ Power Window Switch ကို ကြပ်နေသည်ဟု ထင်ကာ ကွာလတီမကောင်းသည့် ချောဆီများ ထည့်ပါက ၀ိုင်ယာရှော့ဖြစ် ခလုတ်များမှ မီးခိုးထွက်ကာ မီးလောင်နိုင်သော အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အခြေအနေကြောင့်ပါ။ လက်ရှိတွင် အသက်အန္တရာယ်အသေအပျောက်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု တစ်ခုမှ မဖြစ်သေးသော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ယခုလို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်ကားမော်ဒယ်များမှာ -
Vitz - 2006 to 2008 Models
Yaris, Vios, Corolla, Matrix, Auris, Camry, RAV4, Highlander, Tundra, Sequoia, xB and xD produced between 2005 and 2010
(US နဲ့ ကနေဒါတွင်ရောင်းထားသော)
o 2007 to 2009 RAV4 (approx. 336,400)
o 2007 to 2009 Tundra (approx. 337,100)
o 2007 to 2009 Camry (approx. 938,100)
o 2007 to 2009 Camry Hybrid (approx. 116,800)
o 2008 to 2009 Scion xD (approx. 34,400)
o 2008 to 2009 Scion xA (approx. 77,500)
o 2008 to 2009 Sequoia (approx. 38,500)
o 2008 Highlander (approx. 135,400)
o 2008 Highlander Hybrid (approx. 23,200)
o 2009 Corolla (approx. 270,900)
ယခုအစီအစဉ်ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းထားသည့် ကား ၂.၄၇ သန်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းထားသည့် ၁.၄သန်း၊ ဥရောပမှာရှိသည့် ၁.၃၉သန်း၊ အာရှနဲ့သြစတေးလျရှိ ကား ၆၅၀၀၀၀၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ၄၉၀၀၀၀၊ ကနေဒါတွင်ရောင်းချထားသည့် ၂၄၀၀၀၀၊ စင်္ကာပူတွင်ဖြန့်ချီသည့် ကား ၁၅၀၀၀ ခန့် အထက်ပါဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်အတွက် နီးစပ်ရာတိုယိုတာ Authorized Repair Shop တွင်လာရောက်ပြုပြင်ရန် ကြေငြာထားပါသည်။ ပြုပြင်ပေးသည့်အချိန်မှာ မိနစ်၄၀ခန့်သာကြာမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်။
ယခုလို စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ပြန်လည်လက်ခံပြုပြင်ပေးသည့်ကားအရေအတွက်သည် ၁၆နှစ်တာကာလအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး စံချိန်ဖြစ်သည်။ (နောက်ဆုံးယခုလို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြုပြင်ခြင်း ကို Ford ကုမ္ပဏီက ၁၉၉၆က ကားအရေအတွက် ၇.၉သန်းဖြင့် စံချိန်တင်ထားခဲ့တာပါ။) ယင်းကဲ့သို့ များပြားသည့်အရေအတွက်ကြောင့် တိုယိုတာကုမ္ပဏီ၏ စတော့တန်ဖိုးများ ၂%ခန့်ထိုးကျသွားခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းရှိ မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် နီးစပ်ရာတိုယိုတာ ဆားဗစ်စင်တာအလွယ်တကူမရှိသည့်အတွက် ပြန်လည်အပ်နှံပြုပြင်ရန်ခက်ခဲမည်ထင်ပါသည်။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိသေးသော်လည်း သတိတော့ထားစေရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ Comments Box တွင်လည်း အကြံပြုချက်ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းနေတဲ့ကားတွေသာစီးလာခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလိုအန္တရာယ်မျိုးတွေတော့ မမှုလောက်ဘူးထင်သော်ငြားလည်း သတိထားလျှင်တော့ မမှားနိုင်ဘူးဟု အသိပေးအပ်ပါသည်။
အာရှအကွီးဆုံး ကားကုမ်ပဏီ Toyota သညျ စကျခြို့ယှငျးမှုတဈခကျြဖွငျ့ မီးဘေးအန်တရာယျရှိနိုငျသောကွောငျ့ မေ ၂ဝဝ၅ နောကျပိုငျးထုတျလုပျထားသော ၎င်းငျး၏ ကားအရအေတှကျ စုစုပေါငျး ၇.၄၃ သနျးခနျ့ကို နီးစပျရာ Authorized Dealer တှငျသှားရောကျအပျနှံကာပွုပွငျမှုခံယူရနျကွငွောလိုကျပါသညျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးတှငျထုတျလုပျထားသော မျောဒယျပေါငျး ၁၄မြိုးခနျ့ လကျရှိပွဿနာတှငျ ပါဝငျပတျသကျသညျဟုကွားသိရပါသညျ။
ပွဿနာအသေးစိတျဖွဈပုံမှာ Power Window Switch ကို ကွပျနသေညျဟု ထငျကာ ကှာလတီမကောငျးသညျ့ ခြောဆီမြား ထညျ့ပါက ဝိုငျယာရှော့ဖွဈ ခလုတျမြားမှ မီးခိုးထှကျကာ မီးလောငျနိုငျသော အန်တရာယျရှိနိုငျသညျ့အခွအေနကွေောငျ့ပါ။ လကျရှိတှငျ အသကျအန်တရာယျအသအေပြောကျ၊ ထိခိုကျဒဏျရာရမှု တဈခုမှ မဖွဈသေးသျောလညျး ဘေးအန်တရာယျကိုကွိုတငျကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့ ယခုလို ပွနျလညျ ပွငျဆငျပေးရနျစီစဉျခွငျးဖွဈသညျဟု ကုမ်ပဏီပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။ ဒီအန်တရာယျဖွဈနိုငျသညျ့ကားမျောဒယျမြားမှာ -
(US နဲ့ ကနဒေါတှငျရောငျးထားသော)
ယခုအစီအစဉျကွောငျ့ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျရောငျးထားသညျ့ ကား ၂.၄၇ သနျး၊ တရုတျနိုငျငံတှငျရောငျးထားသညျ့ ၁.၄သနျး၊ ဥရောပမှာရှိသညျ့ ၁.၃၉သနျး၊ အာရှနဲ့သွစတေးလရြှိ ကား ၆၅ဝဝဝဝ၊ အရှအေ့လယျပိုငျးရှိ ၄၉ဝဝဝဝ၊ ကနဒေါတှငျရောငျးခထြားသညျ့ ၂၄ဝဝဝဝ၊ စင်ျကာပူတှငျဖွနျ့ခြီသညျ့ ကား ၁၅ဝဝဝ ခနျ့ အထကျပါဘေးအန်တရာယျကရြောကျနိုငျသညျ့အတှကျ နီးစပျရာတိုယိုတာ Authorized Repair Shop တှငျလာရောကျပွုပွငျရနျ ကွငွောထားပါသညျ။ ပွုပွငျပေးသညျ့အခြိနျမှာ မိနဈ၎ဝခနျ့သာကွာမညျဖွဈသညျဟုလညျးသိရှိရပါသညျ။
ယခုလို စကျခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့ ပွနျလညျလကျခံပွုပွငျပေးသညျ့ကားအရအေတှကျသညျ ၁၆နှဈတာကာလအတှငျး ကမ်ဘာပျေါတှငျ အမြားဆုံး စံခြိနျဖွဈသညျ။ (နောကျဆုံးယခုလို ပွနျလညျချေါယူပွုပွငျခွငျး ကို Ford ကုမ်ပဏီက ၁၉၉၆က ကားအရအေတှကျ ၇.၉သနျးဖွငျ့ စံခြိနျတငျထားခဲ့တာပါ။) ယငျးကဲ့သို့ မြားပွားသညျ့အရအေတှကျကွောငျ့ တိုယိုတာကုမ်ပဏီ၏ စတော့တနျဖိုးမြား ၂%ခနျ့ထိုးကသြှားခဲ့ပါသညျ။
ပွညျတှငျးရှိ မိတျဆှတေို့အနဖွေငျ့ နီးစပျရာတိုယိုတာ ဆားဗဈစငျတာအလှယျတကူမရှိသညျ့အတှကျ ပွနျလညျအပျနှံပွုပွငျရနျခကျခဲမညျထငျပါသညျ။ ဘာမှစိုးရိမျစရာမရှိသေးသျောလညျး သတိတော့ထားစရေနျတိုကျတှနျးအပျပါသညျ။ အောကျပါ Comments Box တှငျလညျး အကွံပွုခကျြထားခဲ့နိုငျပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့ နှဈပေါငျးမြားစှာအိုမငျးနတေဲ့ကားတှသောစီးလာခဲ့တဲ့အတှကျ ဒီလိုအန်တရာယျမြိုးတှတေော့ မမှုလောကျဘူးထငျသျောငွားလညျး သတိထားလြှငျတော့ မမှားနိုငျဘူးဟု အသိပေးအပျပါသညျ။
Posted at: 10-10-2012 14:28 PM